नि'र्दयी युएई : साथीलाई बचाउन समुन्द्रमा कु'देका दुई नेपाली प्रहरी जेलमा ! - chiyagaff
नि’र्दयी युएई : साथीलाई बचाउन समुन्द्रमा कु’देका दुई नेपाली प्रहरी जेलमा !
मंसिर २७, २०७८ मंसिर २७, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on नि’र्दयी युएई : साथीलाई बचाउन समुन्द्रमा कु’देका दुई नेपाली प्रहरी जेलमा !
यूएई : दुई वर्षअघि अबुधाबी पुगेका बर्दियाका हुमानाथ ढुंगाना र स्याङजाका डाइमण्ड श्रेष्ठलाई गत आइतबार अबुधाबीको खालिदिया प्रहरीले फोन गरेर बोलायो।
पौडी खेल्दा बे’होस भएका साथीलाई बचाउन खोज्दा उनीहरूबि’रुद्ध नै उजुरी परेको थियो। आइतबार प्रहरी कार्यालय गएदेखि उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्।
दुवै जना जे’ल पर्न सक्ने भएकाले प्रहरीको सम्पर्कमा जानुअघि उनीहरूले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘साथीलाई जोगाउन खोज्दा हामीविरु”द्ध नै प्रहरीमा उजुरी परेको छ, दूतावासमा आग्रह गर्‍यौं कुरा कसैले सुनेनन्,’ दुवैको एकै स्वर थियो, ‘हाम्रो कुरा नेपाल सरकारले सुनिदिनुपर्‍यो।’
सम्भवत: उनीहरू अहिले अबुधाबीको कुनै जे’लमा हुन सक्छन्। हुमानाथ र डाइमन्ड काठमाडौंको हिमाल म्यानपावरबाट सन् २०१९ को अगष्ट महिनामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यूएई पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको ६ महिना पनि नभई दुवैजना यस्तो घ”टनामा फसेका हुन्।
अबुधाबीको एउटा होटलमा सप्लाई कामदारको रूपमा खटिएका उनीहरू कार्यरत अवस्थामा नै एक जना सिरियन नागरिक पौडी खेल्दा खेल्दै बे”होस् भएर डुबे। कम्मरसम्म पानी रहेको पौडी पोखरीमा डु”बेको देखेपछि उनीहरूले नै उ”द्धार गरे। अस्पताल पुर्‍याए। तीन दिनपश्चात् उनीहरूलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलायो।
प्रहरीले दुवै जनालाई त्यही दिन प’क्राउ गर्यो। ६५ दिनसम्म जेल बसे। ढुंगानाका अनुसार ती सिरियन नागरिक उपचारको क्रममा को’मामा पुगे। उनको शरीरका नौवटा अं’गले काम गर्न छोड्यो। त्यसपछि बिरामीका परिवारले उनीहरूको वि”रुद्धमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्‍यो।
२०२० को मार्च महिनामा अबुधाबीको अदालतले प्रतिव्यक्ति १४ लाख दिराम अर्थात दुई जनाको २८ लाख दिराम (९ करोड नेपाली रूपैयाँ) तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो। साथीभाइको सहयोगमा माथिल्लो कोर्टमा अपिल गरे। तर, गत महिना माथिल्लो कोर्टले पनि तल्लो कोर्टको फैसलालाई सदर गरिदियो। उनीहरूले साथीभाइ र एनआरएनएको सहयोगमा उच्च अदालतमा अपिल गरे।
सहयोगको या”चना गर्दै लामो समयदेखि लगातार नेपाली दूतावास धाए पनि। गत सालको डिसेम्बर २४ मा फेरि सहयोगका लागि लिखित निवेदन दिए। जनवरी १२ मा गएर पुन: झक्झक्याए। दूतावासले टार्ने र पन्छाउने बाहेक अहिलेसम्म कुनै ठोस् पहलकदमी नलिएको उनीहरूका साथी बताउँछन्।
‘दूतावासले पनि नहेरेपछि उनीहरूको पक्षमा ल”डिदिने कसले ?,’ उनीहरूका सहकर्मी बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने धेरै ठाउँ छ, हामी आ”पतमा पर्‍यौ,’ अब प्रहरीले हामीलाई छाड्दैन होला,’ उनीहरूले प्रहरी कार्यालय जानुअघि भने, ‘मेरो परिवार र देशमा खबर पुर्‍याईदिनु पर्‍यो।’
खुसीको खबर : अब वैदेशिक रोजगार प्रहरीबल गठन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको योजना
असार १४ पछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने तर यस्तो छ नियम…
असार १२, २०७८ असार १२, २०७८ Chiya Gaff
साउदी अमिरको घोषणा : बिदेशी कामदारको पनि तलब वृद्धि हुने
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ Chiya Gaff
युरोपको रोमानियामा नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारको अबसर, यति छ तलब ?
पुस ११, २०७८ पुस ११, २०७८ Chiya Gaff